As of Fri, 29 May, 2020 15:25
मुलुकमा पर्यटन सम्बद्ध संघ–संस्थाहरू अझै पनि एकीकृत रूपमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् । सरसर्ती हेर्दा झन्डै ५० भन्दा बढी राष्ट्रिय स्तरका यस्ता संस्था छन् जो केवल पर्यटनको विकास र संवद्र्धनप्रति समर्पित भनी टोपल्न पछि पर्दैनन् । सबैका आ–आफ्ना कार्यविधि र विधान पनि छन् । सरकारका सम्बन्धित निकायले ती विधानलाई मान्यतासमेत प्रदान गरेको छ । पेसागत रूपमा हेर्ने हो भने त्यस्ता केही संस्थाको स्वायत्ततालाई स्वीकार्नैपर्छ, तर एउटै प्रकृतिका र समान उद्देश्य लिएर एउटै पेसागत वर्गको प्रतिनिधित्व भने एकीकृत रूपमा राष्ट्रिय संस्थाले नै गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई नकार्न सकिन्न ।
विश्वमा मान्यताप्राप्त ८ हजारमिटर अग्ला हिमाल १४ वटा छन् । ८ हजार मिटरभन्दा माथिका अरू ६ वटा हिमाल थप हुँदै छन् । सौभाग्यवश ती ६ वटै हिमाल नेपालमै रहेका छन् । ८ हजार मिटरभन्दा माथिका सबै अर्थात् १४ वटै हिमचुचुरा एसिया महादेशको हिमालय पर्वतमाला भएर पश्चिमदेखि पूर्व फैलिएको छ । एकतिहाइ भाग नेपाल भएर जान्छ । हिमालय पर्वतमालाको एकतिहाइ भागमै विश्वका अग्ला हिमचुचुरा सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङमादेखि लिएर हालसम्मको कान्छो हिमाल सिसापाङ्मा (कम उचाइ ८ हजार १३ मिटर भएको) सम्म रहेका छन् ।
जसै निर्वाचन नजिकिँदो छ, विकासका अनेकथरी प्रलोभन देखाएर मत फकाउने क्रम जारी छ । मत फकाउनका लागि तथ्यांक–मिथ्यांकहरू पेस गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । सबैभन्दा झुक्याउने र भ्रमित तुल्याउने तथ्यांक हो, सन् १९९० को विवरणसँग अहिलेको अर्थतन्त्रको तुलना गर्दै जारी हुने तथ्यांक । यस २७ वर्षको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र २५ गुणाले बढेको फेहरिस्त पस्किने गरिएको छ । अब यस तथ्यांकलाई विश्व अर्थतन्त्रको तथ्यांकसँग समायोजन गरेर हेरौं ।
नेपालमा बिमा व्यवसायको विकास एवं विस्तारसँगै यस क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका उतार–चढाव देखिएका छन् । एकातिर बिमा कम्पनीहरूको संख्या बढेको बढ्यै छ भने अर्कातिर ग्रामीण भेगका जनतासम्म मात्र होइन, सहर बजार तथा शिक्षित जनसंख्यामा पनि बिमाको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । आमनागरिकमा बिमासम्बन्धी ज्ञानको अभाव एउटा पाटो हो भने बिमा कम्पनीहरूको संख्या बढेसँगै बिमा व्यवसाय सञ्चालकहरू स्वयं तथा दक्ष जनशक्तिको कमीलगायत बिमाक्षेत्रमा विद्यमान अन्योल र अस्थिरता पनि बढेको छ ।
सेयर बजारमा अधिकेन्द्रीकरणको प्रभाव
सेयर बजार गतिशील प्रकृतिको हुने भएकाले बजारमा सेयरको मूल्य उतारचढाव हुनुलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ । सर्वसाधारणले सूचीकृत कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीलाई जुनसुकै परिस्थिति र समयमा बजारी प्रक्रियाबाट तय भएको मूल्यमा खरिदबिक्री हुने कुराको प्रत्याभूति चलायमान सेयर बजारबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । नेपालको सेयर बजारमा वास्तविक क्षेत्रका नाफामूलक कम्पनीहरू सूचीकृत हुन नसकी लगानीको क्षेत्रमा विविधीकरण हुन नसकेकै कारण लगानीकर्ताले प्रभावकारी पोर्टफोलियो व्यवस्थापनकोे विकल्प प्राप्त गर्न सकेको देखिदैन । कुनै एक क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न नसक्दा वा समस्या बेहोर्दा समग्र सेयर बजार र यसका लगानीकर्ता पीडित हुने गरेको अवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपाली सेयर बजारको कुल कारोबारमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र अवस्था एवम् वित्तीय क्षेत्रमा बदलिँदो परिदृश्यका कारण सेयर बजारमा परेको प्रभावबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ ।
आज १ मंसिर २०७४, मूल्य अभिवृद्धि कर एक्काइसौं वर्ष प्रवेश गरेको दिन । आज छैटौं राष्ट्रिय कर दिवस पनि । आजै हो, संघीय नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुने महिनाको पहिलो दिन । मूल्य अभिवृद्धि कर नेपालको कर प्रणालीमा आमूल सुधार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्न वि. सं. २०५० भदौदेखि तयारी कार्य सुरु गरिएको थियो र यससम्बन्धी विस्तृत तयारी गरिएपछि यस करलाई मंसिर १, २०५४ देखि लागू गरिएको थियो ।
नेपालमा सरकारी खर्चको झुकाव
नेपालका स्रोतसाधनको उपयोग विवेकशील ढंगले भएको छ कि छैन भन्ने कुराको निष्कर्ष यसको विनियोजनको झुकावको अध्ययनले मात्र निकाल्न सक्दछ । माथि उल्लेख गरेजस्तै नेपालको कुल आम्दानी दुई शीर्र्षक चालू खर्च र पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको हुन्छ । चालू खर्चको अनुपातको तुलनामा पुँजीगत खर्चको अनुपात कम वा बेसी हुँदा देशको विकास पनि कम वा बेसी हुने गर्छ । सरकारी खर्चको झुकाव यी दुईमध्ये एक शीर्षकतिर हुँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने सक्ने असरका बारेमा लेखाजोखा गर्ने उद्देश्य यो लेखको रहेको छ ।